သင်ဒါတွေ သိပြီးပြီလား? တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်ဆိုတိုင်း ယုံကြည်စိတ်ချစွာ သုံးစွဲလို့ရပြီ ထင်ပါသလား? | Myanmar Industry Portal
» သင်ဒါတွေ သိပြီးပြီလား? တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်ဆိုတိုင်း ယုံကြည်စိတ်ချစွာ သုံးစွဲလို့ရပြီ ထင်ပါသလား?
သင်ဒါတွေ သိပြီးပြီလား? တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်ဆိုတိုင်း ယုံကြည်စိတ်ချစွာ သုံးစွဲလို့ရပြီ ထင်ပါသလား?
တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်ဆိုတိုင်း ယုံကြည်စိတ်ချစွာ သုံးစွဲလို့ရပြီ ထင်ပါသလား?
လက်ရှိဈေးကွက်တွင် သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော သာမန်ပလပ်စတစ်ဖြင့် ထုပ်ပိုးထားသော တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်များရဲ့ အားနည်းချက်ကိုရော သိပါသလား?
တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ် ထုတ်လုပ်မှုရဲ့ နောက်ဆုံးအဆင့်မှာတော့ ဆေးထိုးအပ်များရဲ့ ထုပ်ပိုးမှုပိုင်းမှာ ဓါတ်ငွေ့အကြွင်းအကျန်များ ကင်းစင်မှုရှိ/မရှိ၊ အမှုန်နှင့် ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားများ ထပ်မံဝင်ရောက်နိုင်ခြင်း ရှိ/မရှိ ဆိုသည့်အချက်များမှာ ဘေးကင်းလုံခြုံစိတ်ချရသော တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်များနှင့် သာမန် ထုတ်လုပ်မှုနည်းစဉ်များဖြင့် ထုတ်လုပ်နေသော တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်များ၏ ကွာဟချက်ပင် ဖြစ်ပါသည်ကိုလဲ သိပါသလား?
ဆေးဝါးစက်ရုံ(အင်ရောင်း)မှ ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသော တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်များ၏ အားသာချက်များမှာ Ethylene Oxidr Gas ဖြတ်သန်းနိုင်သော Gas Paper Ribbon ကို အသုံးပြုထားသဖြင့် EO Gas မှာ ဆေးထိုးအပ်သို့ လွယ်ကူစွာဖြတ်သန်း၍ ပိုးသတ်မှုကိုထိရောက်စေခြင်း။
EO Gas ဖြင့်ပိုးသတ်သည့်အခါတွင် EO ဓါတ်ငွေ့ကျန်များကို EO Sterilizer မှ Vacuum စနစ်ဖြင့် လေစုပ်ယူ၍ သန့်စင်စေပါသည်။ ထပ်မံ၍ EO Sterilizer ဖြင့် ပိုးသတ်ပြီး ဆေးထိုးအပ်များကို Ventilation အခန်းတွင်းထားရှိသည့်အခါ ကြွင်းကျန်သည့် EO Gas ဓါတ်ငွေ့များသည် Gas Paper ကိုဖြတ်သန်း၍ ပြင်ပသို့ ထွက်ရှိလာပါသည်။ ထွက်ရှိသော EO Gas များကို Exhaust System မှတဆင့် စုပ်ယူပြီး ရေတွင်ဖြတ်သန်းစေခြင်းဖြင့် ပြိုကွဲစေပါသည်။ ဓါတ်ငွေ့ကြွင်းကျန်ခြင်း လုံးဝ (လုံးဝ) မရှိပါ။
သာမန်ပလပ်စတစ်ဖြင့် ထုပ်ပိုးမှုများသည် EO Gas ဖြတ်သန်းနိုင်ခြင်း မရှိပါ။ Packing ပြုလုပ်၍ လုံခြုံစွာ ထုပ်ပိုးပြီးမှသာ EO ဖြင့်ပေါင်း၍ ပိုးသတ်ရမည့်အစား Packing အိတ်များကိုဖွင့်၍ ပေါင်းပြီး အကာအကွယ်မဲ့ ပြန်လည်ထုပ်ပိုးထားသော Poly Pack ပလပ်စတစ်အိတ်များဖြင့် ထုပ်ပိုးမှုစနစ်မှာ လှပခိုင်ခံ့သည်ဟု ထင်ရသော်လည်း အမှုန်နှင့် ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားများ ကင်းစင်ကြောင်း အာမခံချက် မရှိပါ။
သင်ဒါတွေကိုဖတ်ရှုပြီးပါက ဘေးကင်းလုံခြုံစိတ်အချရဆုံးသော တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်များကိုသာ သုံးစွဲရန် တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
ဆေးဝါးစက်ရုံ(အင်းရောင်း)မှ ထုတ်လုပ်သော WHO GMP နှင့်အညီ ဘေးကင်း၍ လုံခြုံစိတ်အချရဆုံး တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်များ၊ သက်ကယ်သက်စောင့် သွေးကြောသွင်းဆေးရည်များ၊ ထိုးဆေးရည်မျိုးစုံ၊ မျက်စဉ်းဆေး၊ ကဲဒီဂလူးကို့နှင့် ဓါတ်ဆားမှုန့် တို့ကို ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် လူကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း၊ အမှာစာပေးပို့၍သော်လည်းကောင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းမှာယူနိုင်ပါသည်။
ဆက်သွယ်ရန်- 09-779476900. email address : mpfiy2016@gmail.com
credit: MPF Inyaung